The Voice Of Somaliland: Golahii Wakiiladda oo la afgambiyey
Golahii Wakiiladda oo la afgambiyey
(Waridaad)-“Waxaan shacbiga Reer Somaliland u sheegaynaa in Golihii ay soo doorteen Ciidan qabsaday. Waxay iska hortaageen saxaafadii iyo dadweynihii martida ahaa.” Gudoomiyaha G/Wakiilada Cabdiraxmaan Ciro
Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi [Ciro], ayaa shaaca ka qaaday in Golahii Wakiilada ay ciidan fara badan oo boolis ahi qabsadeen, isla markaana diideen inay fadhiga ka joojiyaan Mudanayaashii uu hore uga joojiyey inay saddexda fadhi ka qayb-galaan, kuwaas oo hore golaha 24-kii bishan qaska iyo fawada uga abuuray.
Gudoomiyuhu waxa si sidaa ku sheegay war-saxaafadeed kooban oo uu maanta ka soo saaray xarrunta Golaha, ka dib markii fadhigii Golaha ee maanta ay diiyeen in ay ka baxaan Lixdii Mudane ee hore shirgudoonka Golahu ugu anshax mariyeen in laga saaro sadex fadhi.
War-saxaafadeedkaasina waxa uu u qornaa sidan sidan:- ................GUJI HALKAN
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Saturday, August 29, 2009